Xisbiga Waddani Oo Ka Hor Yimid Warqada Madaxwayne Siilaanyo u Gudbiyay Maxkamada Sare….. | Saxil News Network
Xisbiga Waddani Oo Ka Hor Yimid Warqada Madaxwayne Siilaanyo u Gudbiyay Maxkamada Sare…..
hargeisa(Saxilnews.com)”Xisbiga Mucaaridka Waddani ayaa ka hadlay warqada madaxwayne Siilaanyo u gudbiyay maxkamada dastuuriga ee lagu kala saarayo heshiiskii axsaabta qaranka iyo mudo kordhinta golaha guurtida.
Madaxwayne Siilaanyo ayaa todobaadkan maxkamada sare u gudbiyay warqad uu maxkamada ku waydiistay in ay soo kala saarto heshiiskii axsaabta iyo mudo kordhinta golaha guurtida mida sharciga waafaqsan.
Afhayeenka xisbiga Waddani xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa ayaa sheegay inaanu madaxwayne Siilaanyo daacad ka ahayn warqadaasi uu u gudbiyay maxkamada dastuuriga ah isla markaana uu ku qoray waxaan ahayn ujeedadii la isku hayay ee uu madaxwaynuhu ku qoray in lasoo kala saaro xisbiyada qaranka iyo golaha guurtida.
Xildhibaanku waxaa uu madaxwayne Siilaanyo ku eedeeyay inuu la ogyahay mudo kordhinta guurtida, kulankii madaxwayne Siilaanyo iyo golaha guurtida waxaa uu ku sheegay mid ay isla ogaayeen madaxwaynaha iyo odayaasha guurtidu.
“Qaabka uu madaxwaynuhu warqada u qoray, uma aragno inay ahayd sidii saxda ahayd, meesha waxaa ku qornayd, soo kala saara ta sharciga ah heshiiskii axsaabta iyo go’aankii guurtida, waxay muujinaysaa inaanay jirin guurti madaxwaynaha diiday ee ay ku wada socdeen markiiba hore.”Ayuu Yidhi Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa oo maanta uwaramayey Somnews Tv.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan maxkamada dastuuriga “Waxaanu rajo wanaagsan ka qabnaa go’aanka ay soo saarayso maxkamada dastuuriga ah,Oo Iyadu siiqada wax looga dalbaday sida sharciga kusoo rogi doonta, waxaanu filaynana inay soo saari doonto go’aan Somaliland u horseeda horumar, khilaafka siyaasiga ee dalka ka jirana wax ka badala”Ayuu Ibraahim Mahdi Buubaa.
Xildhibaan Ibraahin Mahdi Buubaa waxaa uu beeniyay wararka sheegaya inuu Is casilayo guddoomiyaha golaha wakiilada Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, isagoo ku dooday in aanu Kursiga ka tageyn ilaa doorasho dalka ka dhacdo, isla markaana uu yahay shakhsiga kaliya ee dabada ka riixaya in doorasho dalka ka dhacdo.
By Maxamed Hassan Adan(Faradeero)